बाबुरामले नबुझेको उपेन्द्रको गोप्य चाल…. | Diyopost
बाबुरामले नबुझेको उपेन्द्रको गोप्य चाल….
काठमाडौं । कुनै सिद्धान्त र भागबण्डाविनै संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा पार्टी मिसाएका नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले संगठन गरेर बस्न सक्दैनन् भन्ने उदाहरण देखाएका छन् । डा.भट्टराई फस्टम्यान हुनै सक्दैनन् भन्ने कुराको प्रमाण उनी आफैले दिएका छन् । संघीय फोरममा पार्टी बिलय हुनेवित्तिकै आयोजित शपथको कार्यक्रममा उपेन्द्र यादवले जेष्ठ सदस्यसँग शपथ लिए । यादवले नै बाबुरामसहितका नेताहरूलाई शपथ खुवाएका छन् । शपथको काण्डसँगै समाजवादी पार्टी नेपालको सबैभन्दा ठूलो नेता यादव हुन् भन्ने देखाएको छ । यादवलाई डा.भट्टराईले नेता मान्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यादवले डा.भट्टराईलाई हरेक ठाउँमा डुबाएको चर्चा हुन थालेको छ ।
उपेन्द्र यादवको चुनावी घोषणा पत्रलाई डा.भट्टराईले जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गरेका छन् । संघीय फोरमको पार्टीको झण्डा पनि डा.भट्टराईले स्वीकार गरेका छन् । दुई पार्टी मिलेपछि बनेको समाजवादी पार्टी नेपालमा ‘नेपाल’ शब्दमात्रै मिलेको छ । अरु सबै यादवको लाइनअनुसार नै भएको छ । निर्वाचनको चुनाव चिन्ह पनि संघीय फोरमकै मशाल रहनेछ । नयाँ शक्ति पार्टीको आँखा चुनाव चिन्ह छाडिएको छ । २५ जनाको केन्द्रीय सचिवालयमा ९ जना नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका छन् । बाँकी सबै उपेन्द्र यादवका नेताहरू छन् । सचिवालयमा डा.भट्टराई अल्पमतमा छन् । समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष रहेका यादव नै कार्यकारी अधिकार लिएर बसेका छन् ।
एक सय जनाको संघीय परिषदको अध्यक्षको जिम्मेवारी डा.भट्टराईलाई दिइएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णयलाई उल्टाउने अधिकार रहेपनि संघीय परिषदको बैठक बस्न सक्ने कुनै पनि सम्भावना छैन । चार शीर्ष नेताहरूमा पनि डा.भट्टराई अल्पमतमा छन् । चार शीर्ष नेताहरूमा अध्यक्ष यादव, डा.भट्टराई, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन् । युनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ ।
नयाँ शक्ति पार्टीलाई अध्यक्ष यादवले पेलेरै आफ्नो पार्टीमा मिसाएका छन् । उनीहरूले भूगोलसहित दश संघीय राज्यको अबधारणा अगाडि सारेका छन् । उनीहरूको यो माग तत्काल पूरा हुने छाँटकाँट छैन । पार्टी एकीकरण भएपछि संघीय फोरमको संघीय समाजवादलाई समुन्नत समाजदावका रुपमा ब्याख्या गरिएको छ ।